Twin akakwazi utshata e Seoul, ukuba nihambe ubomi eyahlukileyo
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Twin akakwazi utshata e Seoul, ukuba nihambe ubomi eyahlukileyo
Ubudlelwane phakathi umphefumlo amawele ke isiphelo yokwenene elinye iqela ukutsala indlela
ukufumana [3500 yen yovavanyo lwentsebenzo Free] ukuya oosiyazi akunyanzelekanga ukuba kuphela mfuneko ibotshelelwe kweli hlabathi.
Kakade, kuba iyavakala ukuhlangabezana angummangaliso kweli hlabathi, kumanywa ekugqibeleni yandwendwelwa yomzuzwana, oku kwakhona kukhokelela umtshato. Nangona kunjalo ke akukho namnye oko uzimisele, ukuba andise yawo omnye komnye, into tyelela sihlangane kwi ixesha ukukhula komphefumlo.
Noko ke, abantu ababini akwanelanga ukuba nokuhlanganisa nge nobungcwele, oku kuya kunika ityala ukuhamba ubomi obahlukileyo. Oku, ummangali akuthethi ukuba umphefumlo ngamawele, kodwa simele sicinge yaye akazange ahlangabezane iziqalelo ukuze izakubanodibaniso kweli hlabathi. Ukongeza, ukuze umphefumlo liwele ngenene mnye, kufuneka boyise intlungu enkulu. Ukuba awukwazi basusa, ifika ukwahlukana kakuhle ngaphandle Soitogeru ubomi emtshatweni. In
newele Seoul akuyona indlela engcono ukuba ongabotshwa kutheni
? Abantu 2 Awabotshwanga akakwazi, nto leyo nayo ibotshelelwe njengoba ndandidibana ukuphucula imeko umphefumlo, abantu 2 alibophe ziya kuqwalaselwa ukuba kwenziwe njengoko isigqibo uThixo akuyona indlela engcono. Not kulindeleke ukuphucula omnye ngokuba kunye, ukuba awukwazi besiya ulonwabo lokwenene, isiphelo oko kumncothula umphefumlo amawele.
? khona ukuze ube kwaye
amawele Seoul kunye lowo nathi khangela ukuba omnye umntu, ulahle iingcinga uyazingca nesigama kwizigaba eziliqela, kuya kufuneka ukuba uthando olungenamiqathango. Ngoko ke, ungakwazi kuthembela kwelinye iqela nokuba kakhulu omnye umdla omnye kakhulu, ezifana okanye ithemba nokuzaliswa kwale ndawo leyo akwanelanga yabo, abantu ababini yaye bafuna umntu oza kukuzingca kuya kunyanzeleka Wahamba ngendlela eyahlukileyo . Inxalenye ukuba andifuni ukubona
newele Seoul anahlule ekuqaleni omnye umphefumlo kumgxobhozo look at, ithi ukuba ubukho, ekungazanga kubekho nekubonakala kwenye zabo. Ngenxa yesi sizathu, ukuze ubone amaxesha mna ukuba zange afune ukubona elinye iqela. Ukongezelela, ekubeni ngokufuthi na ukuba inxalenye esahlukileyo, khona amatyala ezikhokelela ekubeni kubekho umgxobhozo saba nako ukuthwala, ukuze abone ukuba inxalenye.
Xa unengxaki ukwahlukana ngaphandle kukhokelela umtshato nabantu ababonakala a
ukuba amawele Seoul ingqalelo yaye yaba kwetyala ukuphucula umphefumlo, uya ukungcamla intlungu, ezifana ixesha umphefumlo eqwengiweyo. Ukongeza ukuphucula umphefumlo kuba naye umsebenzi ubungqina uhlukunyezwe yimikrwelo yaye eli hlabathi ukuba ethwele ubomi yangaphambili, oko kusenokuba buhlungu.
kwiingcamango ezinjalo, yonke intlungu ukuba ingamelana umphefumlo. Oku emva kokudlula kwi ntlungu, ingabe ukuba kwanokuba umphefumlo ikufutshane eliphezulu-mbini njengoko kwabakho ukwahlukana komphefumlo ngamawele, ukuba akhule ezinkulu ukuze abantu.